I-Casa de Madeira sobre o Lago - I-Airbnb
I-Casa de Madeira sobre o Lago
Santo Isidoro, Lisboa, i-Portugal
Indlu encane ibungazwe ngu-Guillermo
U-Guillermo Ungumbungazi ovelele
Indlu Enhle Yokhuni.
Ilungele imindeni noma abatshuzi
Ingadi enhle, ichibi, i-skate kanye nendawo yepulazi
Indawo yokupaka yamahhala, ephephile
Indlu ethandekayo yesitudiyo sokhuni e-Monte Bom, idolobhana elisemaphandleni elinokuthula lamaPutukezi. Itholakala ekuhambeni kwemizuzu eyi-10 ukusuka emabhishi ahlukahlukene e-Ericeira World Surfing Reserve afana ne-Ribeira D'Ilhas, i-Coxos, ne-São Lourenço.
Indlu izimele, inokukhanya okukhulu kwelanga futhi ibheke empumalanga, okukunikeza ukubukwa okumangalisayo noma ukuphuma kwelanga phezu kwamagquma azungezile.
Le ndlu encane enekamelo elilodwa inombhede ophindwe kabili esitezi esiphezulu esibheke isigodi esingezansi. Ivuselelwe ngokuphelele, inekhishi, igumbi lokugezela, kanye negumbi lokuhlala elinethezekile/indawo yokudlela le ndlu encane yokhuni iyindawo ekahle yokuhamba ngokuthula emaphethelweni edolobhana lezwe lamaPutukezi.
Le ndlu yesitudiyo isemaphethelweni edolobhana endaweni yasemakhaya eyi-10000m2, egcwele izihlahla zezithelo, ukulima okuphilayo, kanye nezilwane zasemapulazini ezimbalwa; njengehhashi, izimbuzi nezinkukhu lapho wonke umuntu angavakashela khona. Izivakashi zikhululekile ukuhlanganyela emikhiqizweni yezwe. Kuyilungiselelo elihle kakhulu lokosa inyama ngenkathi ucwiliswa emibukweni futhi uhlola indawo yasemakhaya yesiPutukezi evamile.
Indawo ithule, futhi indlu esemaphethelweni edolobhana iyibeka kude nomgwaqo omkhulu. Indawo iyamangalisa, lapho ubheka amagquma namadolobhana azungezile, iMafra Palace ibonakala buqamama. Kukhona ikhefi emgwaqeni kanye negrosa elincane phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
Abanikazi bahlala ngaphesheya komgwaqo futhi bayatholakala ukuze basize nganoma yikuphi ukungabaza, ulwazi noma isiqondiso. Sizokusiza ngeziphakamiso kumasayithi amahle ongawavakashela, ukuthi ungathola kuphi ukudla kwakho, kanye nokuthi zonke izinsiza zendawo zikuphi. Sikhuluma isiNgisi, iSpanishi, isiPutukezi nesiJapane, futhi singakwazi ukudlula ngesiFulentshi nesiNtaliyane futhi.
Abanikazi bahlala ngaphesheya komgwaqo futhi bayatholakala ukuze basize nganoma yikuphi ukungabaza, ulwazi noma isiqondiso. Sizokusiza ngeziphakamiso kumasayithi amahle ongawavakas…
UGuillermo Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 96639/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Santo Isidoro namaphethelo